02 မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခအကျပ်အတည်း ရိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်ရန် ရုန်းကန်နေရသော နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူ မိသားစုဝင်များ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပဋိပက္ခအကျပ်အတည်း ရိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်ရန် ရုန်းကန်နေရသော နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူ မိသားစုဝင်များ
၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ပြည်တွင်းရှိလူပေါင်း ၄၄၀,၀၀၀ခန့်သည် နေရပ်စွန့်ခွာနေကြရပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံရာရှာဖွေရင်း မကြာခဏဆို သလိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရသည်။
03 လူမျိုးစုကြားကွဲပြားခြားနားမှုများအား ကြိုးပမ်းကူညီဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူငယ်များ
လူမျိုးစုကြားကွဲပြားခြားနားမှုများအား ကြိုးပမ်းကူညီဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူငယ်များ
01 ယူနီဆက်နှင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့များက ကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ပံ့ပိုး
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိင်တူချင်းချစ်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကဲ့သို့ ပြုမူနေထိုင်ခြင်းများအား မုန်းတီးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောနေ့ သဝဏ်လွှာ
အထူးကဏ္ဍ အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်းများ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက်။
3 ၏ 1
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်။
This report presents the results of the nineteenth Myanmar opium survey. Examining the 2020/2021 opium growing season, it reflects data collected between November 2020 and January 2021 (end of winter harvest). As the first cultivation season following the start of the COVID-19 pandemic, it helps to understand the possible impact of the pandemic on Myanmar’s opium economy. However, it does not reflect the social, economic, security and governance disruptions that followed 1 February 2021.
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးနေ့ (World Day for Safety and Health at Work) အထိမ်းအမှတ်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) မှ သတင်းအချက်အလက်များ ဝေမျှပေးသော အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ် တစ်ခုကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
“အလုပ်ခွင် ကျန်းမာလုံခြုံအောင်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ကြရအောင် ” အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု အစီအစဥ် သည် အလုပ်သမားတို့၊ အလုပ်ရှင်တို့ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာတိုးပွားလာ၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ အနာတရ ဖြစ်ခြင်း၊ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့အား ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် အပြုအမူများ၊ စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ သိရှိဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယခုနှစ် အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကဲ့သို့သော COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ခံနိုင်ရည်ရှိစွာတုံ့ပြန်နိုင်စေရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်တို့၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍများကို အလေးပေးထားပါသည်။ ယခုအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်၏ Facebook Page တွင် လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်းတို့အား ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ COVID-19 နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့်လျှော့ချစေရန် သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အသက်မွေးလုပ်ငန်းတို့အား ထိခိုက်နေသည့် COVID-19 ရောဂါ နှင့် စစ်တပ်၏ အာဏာလွှဲပြောင်းယူမှု နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များကို ကြံ့ကြံ့ခံ၍ တောင့်ခံနိုင်မှုတို့အား တည်ဆောက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်” ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်/ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေး အရာရှိ Mr. Donglin LI မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ ရရှိသော ရောဂါများကြောင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား လုပ်သားပေါင်း (၂.၉) သန်း တို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သေဆုံးနေကြရသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ထိုသို့သော သေဆုံးမှုများ၏ (၁.၅) သန်းကျော်သည် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေတို့ကြောင့် ရရှိသော မကူးစက်တတ်သောရောဂါတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မသေဆုံးနိုင် သော မတော်တဆမှုသန်းပေါင်း (၃၆၀) နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ နေပါသည်။
ကမ္ဘာ့လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးနေ့ (SafeDay) သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍ၏ အဓိကကျသော အစီအမံနှစ်ခု ဖြစ်သည့် သိရှိနားလည်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အားပေး ထောက်ခံလိုက်နာ နိုင်စေခြင်း တို့၏ လွန်စွာအရေးပါမှုကို ဖော်ပြနေပါသည်။ SafeDay သည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမားအားလုံး အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် ရရှိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် “ကုလသမဂ္ဂ၏ စဥ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်” ၏ ပန်းတိုင် နံပါတ် ၈ အား ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသည်။
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့် လျှော့ချစေရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) မြန်မာမှ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ် COVID-19 ရောဂါ စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအားလုံးမှ အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်ပေါင်း ၆၀၀၀ကျော် (အမျိုးသမီး ၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) တို့အား Vision Zero Fund စီမံကိန်းမှ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်း စသော သင်တန်းပို့ချမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ILO Global Flagship အစီအစဥ်ဖြစ်သော Safety + Health for All ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်သားအားလုံး၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး (Safety and Health for All Workers) စီမံကိန်းအောက်တွင် စိတ်ကျန်းမာရေးသည်လည်း အဓိကဦးစားပေးသော ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းစီမံကိန်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ၊အသိမြှင့်တင်ရေးနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုဆိုင်ရာ သင်တန်းပို့ချမှုတို့ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အခြားများစွာသော အလှူရှင်တို့၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Vision Zero Fund စီမံကိန်းနှင့်၊ ဂျပန်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် Safety and Health for All Workers in Myanmar စီမံကိန်းတို့ ပူးပေါင်းကာ SafeDay အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်ကို စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
အသက် ၆ နှစ်အရွယ် လျှံထက်ဟာ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ အမေဖြစ်သူအနီးမှာပဲနေပြီး ဝေးဝေးလံလံကို မသွားရဲပါဘူး။ “သားမှာသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သားအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက အောက်ထပ်ကခွေးလေးပေါ့။ သားတို့က ညနေတိုင်း အတူတူကစားကြတယ်” လို့ လျှံထက်ကပြောပြပါတယ်။ လျှံထက်ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာလေးက တောက်ပနေဆဲဖြစ်ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူ မနှင်းနှင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကလေးကို ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ “ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေခဲ့ဘူး၊ နောက်ကိုဗစ်-၁၉ ပထမလှိုင်းဖြစ်တယ်၊ နောက်တော့ အခုလက်ရှိပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတယ်၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပါပဲ။” ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါက လျှံထက်ရဲ့ အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးနဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကို ပြတ်တောက်စေခဲ့ပါတယ်။ စစချင်း “မေမေက သားကို အိမ်မှာသင်ပေးတယ်” လို့ လျှံထက်ကပြောပြတယ်။ ကံကောင်းတာကတော့ လျှံထက်က အင်တာနက်သုံးခွင့်ရပါတယ်။ သူက Zoom ကတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းကသင်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
“သားက ပန်းချီဆွဲရတာလည်း သဘောကျတယ်” လို့ လျှံထက်က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် က စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက လျှံထက်အပေါ်မှာ ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မသားလေးက စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်။ ကျွန်မပေါ်မှာ လွန်လွန်ကဲကဲ တွယ်တာလာပြီး မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်လောက်အောင် ကပ်လာတယ်။ မနက်ဆို အိပ်ရာထဲမှာတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ ကျွန်မအိပ်ရာထတာနဲ့ လိုက်ထတယ်။ ကျွန်မဘုရားရှိခိုးရင်တောင် သူက ကျွန်မဘေးမှာ ကျွန်မနဲ့အတူထိုင်နေတတ်တယ်” လို့ မနှင်းနှင်းက ပြန်ပြောပြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြစ်နေတာ လျှံထက်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ကလေးငယ် ၁၂ သန်းခန့်ဟာ တစ်နှစ်နီးပါး ကျောင်းမတက်ရောက်နိုင်ကြဘဲ လက်ရှိအကျပ်အတည်းကလည်း ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထပ်ပြီးလျော့ပါးစေပြန်ပါတယ်။ အများစုက အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ အချို့က ထိခိုက်နစ်နာသူတွေဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီဆက်နဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဒီပြဿနာကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကလေးငယ်တွေနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် စိတ်၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တိုးချဲ့ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒီပံ့ပိုးမှုတွေထဲမှာ တစ်ဦးချင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု၊ ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အချင်းချင်းကူညီပေးနိုင်ဖို့ အဖွဲ့ လိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများ စိတ်ခံစားချက်များကိုမျှဝေပြီး အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်းများအပြင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူမိဘများ အတွက် တနိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံသည့် စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးဖုန်းလိုင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှာ လျှံထက်က အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ပြုလုပ်တဲ့ ပစ်တိုင်းထောင်လေးများအမည်ရှိ စိတ်လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုမှာ စပြီးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပစ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း အမြဲတန်း ထောင်နေတတ်တဲ့ အရောင်တောက်တောက်ပပနဲ့ ဘဲဥပုံ မြန်မာ့ရိုးရာကစားစရာ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကို တင်စားပြီး အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မနှင်းနှင်းက ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ၊ ရင်းမြစ်စင်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Metanoia ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Metanoia ဟာ ယူနီဆက်ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ Metanoia ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ အရင်ဆုံး အွန်လိုင်းကူညီပေးရေးဖုန်းလိုင်း အော်ပရေတာတွေက အစီအစဥ်မှာ ပါဝင်သူတွေကို အမည်စာရင်းသွင်းပေးပြီး ပံ့ပိုးပေးမယ့် အစီအစဥ်တွေကို ရှင်းပြပါတယ်။ အသက် ၇ နှစ်အထက်ကလေးတွေက အကြိုအကဲဖြတ်ချက်နဲ့ နှောင်းပိုင်းအကဲဖြတ်ချက်ပုံစံတွေကို ဖြည့်ရပါတယ်၊ အသက် ၇ နှစ်အောက်ကလေးဆိုရင် အုပ်ထိန်းသူက ကလေးကိုယ်စား ပုံစံတွေကိုဖြည့်ပေးရတယ်။ ၃ ရက်ကြာအစီအစဉ်ကို ၄-၁၂ နှစ်၊ ၁၃-၁၇ နှစ် နဲ့ ၁၈-၂၉ နှစ်ဆိုပြီး အသက်အရွယ် အုပ်စုသုံးစု ခွဲပေးထားတယ်။ ပိုငယ်တဲ့ကလေးတွေက “အနုပညာနဲ့ လက်မှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ရင်း စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ စာနာစိတ်၊ လေးစားသမှုနဲ့ အကန့်အသတ်ဘောင်တွေအပြင် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေကို နားလည်အောင်လေ့လာကြတယ်” လို့ Metanoia ဝန်ထမ်းက ရှင်းပြပါတယ်။ အသက်ပိုကြီးတဲ့အုပ်စုတွေက “အကျပ်အတည်းတွေအပေါ် တုံ့ပြန်ပုံတွေကို နားလည်ဖို့၊ တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းစနစ်တွေကို လေ့ကျင့်ဖို့၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အသိကို အားပေးမြှင့်တင်ဖို့၊ မျှော်လင့်ချက်ထားရှိဖို့၊ အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်နေဖို့နဲ့ အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်မယ့် အရည်အသွေးများ ခိုင်မာစေဖို့အပေါ်မှာ အလေးပေးလေ့လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။” အုပ်စုလိုက်အစီအစဉ်ပြီးတဲ့အခါ အများအားဖြင့် ပါဝင်သူတွေကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ Metanoia ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က “နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ကို [သူတို့သားသမီးတွေကို] ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေးဖို့၊ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာမိဘတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကုထုံးလိုအပ်နေတာက သားသမီးတွေမဟုတ်ဘဲ မိဘတွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတတ်တယ်” လို့ ပြောပြပါတယ်။ မနှင်းနှင်းက “ဒီအစီအစဉ်က တကယ်ကောင်းမွန်ပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့ အားလုံးကို ကျွန်မအကြံပေးချင်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမလို တစ်ကိုယ်တော်မိဘတွေဟာ ဒီအကျပ်အတည်းလို ကာလမျိုးမှာ ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်လို့ ပြောပြတယ်။ “ဒီစီမံချက်က မိဘတွေကိုကော၊ သားသမီးတွေကိုကောပါ တကယ့်ကို ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။” လျှံထက်နဲ့ သူ့မိခင်နှစ်ဦးစလုံး ကတော့ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသူတစ်ဦးထံကနေ သီးခြားကုထုံးတွေကို ရယူခဲ့ကြပါတယ်။ “ သား က အကြံပေးအမျိုးသမီးနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်” လို့ မိခင်ကပြောပြတယ်။ “ သား က အကြံပေးအမျိုးသမီးအကြောင်း အိပ်မက်မက်လို့ သူ့အကြောင်းကိုတောင် ကျွန်မကိုမေးလာတယ်။” အစီအစဉ်အချိန်တချို့ပြီးသွားချိန်မှာ သူက (သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို) ပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်မကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံတာကလွဲရင်ပေါ့” လို့ မနှင်းနှင်းက ပြောပြပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ UNICEF မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
5 ၏ 1
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ပိုင်းဒေသရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တိမ်ပြာပြာ ဆောင်းရာသီ နေ့ရက်တစ်ရက်၌ ကျေးရွာချင်း နီးစပ်လျက်ရှိသော ရခိုင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်သောရွာ နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအများစု နေထိုင်သော ရွာတို့မှ ရာနှင့်ချီ သောလူများသည် လယ်ကွင်းပြင်တစ်ခုဆီသို့ စုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ လေပြေလေညင်းများကြောင့် ပတ်၀န်းကျင် တစ်ခုလုံးက နှစ်သက် ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းပြီး ကြီးမားသော ယာယီ အားကစားကွင်းအတွင်း လူအများ စုဝေးနေသောကြောင့် ပွဲတော်တစ်ခုကဲ့သို့ စည်ကားလျက်ရှိပါသည်။ ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကစားသမားများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဘောလုံးပွဲစတင်အချိန်တွင် မြင့်ဆွေ သည် ဂုဏ်ယူ၀မ်းမြောက်လျက်ရှိသည်။ “ဒီပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်မြောက်အောင်ဖွဲ့စည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပါတယ်။” ဟု ရခိုင်ကျေးရွာဖြစ်သည့် ပျားလည်ချောင်းကျေးရွာ မှ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ၎င်းက ပြောသည်။ ရခိုင်ရွာမှခြေလျင်သွားလျှင် ၁၀ မိနစ်ခန့်သာဝေးသော ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာဖြစ်သော ပြင်ရှည်ရွာ မှ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် မောင်ကျော်မောင်သည်လည်း ဘေးကနေကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်။ “ရွာနှစ်ရွာက လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီး အခုလိုပွဲဖြစ်မြောက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းတို့သည် အဆိုပါပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြသည့်လူငယ်ရှစ်ဦးအနက်မှနှစ်ဦးဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဟုအမည်ပေးခေါ်ဆိုကြသည့်ထိုအဖွဲ့တွင် ကျေးရွာနှစ်ရွာမှလူငယ်လေးဦးစီ ပါ၀င်ပြီး၊ အဆိုပါလူငယ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာလူမှုအသိုက်အ၀န်းမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုဘောလုံးပြိုင်ပွဲကဲ့သို့သောပူးတွဲလုပ်ရှားမှုများစီစဥ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လူမှုအခက်အခဲများကို အတူအကွ ပူးပေါင်း မျှဝေဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာရေး ကွဲပြားမှုဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ ၍ နှစ်ဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းများ အကြားလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ကာ ယခုကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဖြစ်ရပ်များ ရှားပါးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသအချို့ တွင် ကြီးမားသောအကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာရပ်များ ကြုံတွေ့ခံစားလျက်ရှိပြီး၊ ယခင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် သမိုင်းဝင်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသောဒဏ်ရာများကို အပြည့်အဝကုစားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှစတင်၍ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ စသည့် ပြဿနာရပ်များ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမှုအသိုက်အ၀န်းအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်သည် အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ နောင်ငါးနှစ်အကြာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပဋိပက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ၇၄၀,၀၀၀ ကျော်ကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရန် ဖိအားပေးခဲ့ သည်။ စုစုပေါင်း ရိုဟင်ဂျာ ၁.၆ သန်းခန့်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မလေးရှားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်ရှိနေသေးသော ရိုဟင်ဂျာ ၆ သိန်းခန့်ရှိသည့်အနက် ၁၄၈, ၀၀၀ခန့် သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ မိမိနေထိုင်ရာနေအိမ်သို့ နေရပ်ပြန်ရေးမျှော်လင့်ချက်အလားအလာများသည် လတ်တလောကာလတွင် အခြေအနေဝေဝါးလျက်ပဲရှိနေသေးသည်။ အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ရခိုင်လူမျိုးလူမှုအသိုက်အ၀န်းနှစ်ရပ်လုံးအကြား ယုံကြည်မှု နည်းပါးသည့်အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည့် ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာများသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်နှင့် ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကဲ့သို့သော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက ရရှိခံစားပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံခံရလျက်ရှိပြီးနောက် အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည်မရေရာသော ဘဝအခြေအနေများဖြင့် ရှင်သန် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း လူနေမှုဘဝအခြေအနေ မြှင့်တင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သော်လည်း ယင်းဒေသအတွင်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့် သက်သေခံအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း ရရှိနိုင်ခွင့်တို့ တွင် သိသိသာသာတိုးတက်လာခြင်းမရှိသေးပေ။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR သည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပူးပေါင်း၍ လူမျိုးစုနှစ်ခုကြားတွင် လူမှု ကျွမ်း၀င်ရင်းနှီးပေါင်းစပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အနာဂတ်ကာလတွင် နှစ်ဘက် လူမှုအသိုက်အ၀န်းများအကြားတွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်ခြေများ လျှော့ချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။ ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာကျေးရွာများပါဝင်သော ယင်းအောင်မြင်သည့်အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော အားကစားနေ့ ပွဲတော်သည် UNHCR ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည့် ACTED ၏ တစ်နှစ်တာ ကျေးလက်လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်သော စီမံကိန်းတစ်ခု၏ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ဖွယ် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့် အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ “လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး ပုံဖော်ဖန်တီးရာမှာ အဓိကနေရာမှာ ပါဝင်ပါတယ်။” ဟု ACTED မှ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ထင်ကျော်မင်း က ပြောသည်။ "သူတို့တွေဟာ တွေ့ဆုံ‌ေဆွးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ သူတို့အချင်းချင်း ကြားမှာသာမက သူတို့ရဲ့ရပ်ရွာလူထုကြားမှာလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်” မောင်ကျော်မောင်နှင့် မြင့်ဆွေတို့ ပါဝင်သည့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် ACTED မှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းခြောက်ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်များနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းများ စသည်တို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့နောက် ယင်းတို့သည်နှစ်ဘက်ရပ်ရွာလူထုများအား အကျိုးရလဒ်ကောင်း များ ဖြစ်ထွန်းလာစေမည့်ပူးတွဲအဖြေရှာဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ ခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်း တို့ကို ရပ်မိရပ်ဖများ၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည် ရပ်ရွာလူထုနှစ်ဖက်စလုံးအား ဝင်ငွေရရှိစေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအနေဖြင့်လည်း ပံ့ပိုးကူညီပြုလျက်ရှိသည်။ “ဒီလို အားကစားနေ့လိုမျိုး ရပ်ရွာလူထုပွဲတွေမှာ စားပွဲ၊ထိုင်ခုံတွေ အသုံးပြုလို့ရအောင် ဝယ်ယူထားဖို့ အခုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သင်တန်းကပဲ အကြံပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို နောက်အခြားရွာတွေမှာ ပြန်အသုံးပြုငှားရမ်းတဲ့အခါ ဝင်ငွေလဲရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အခုလိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြင့်ဆွေက ပြောသည်။ “ကျွန်တော်တို့ရွာနှစ်ရွာကို ဆက်သွယ်တဲ့ လမ်းဖောက်တာ ပြီးစီးဖို့ ဒီကရလာတဲ့ဝင်ငွေကို အသုံးပြုချင်ပါတယ်။” ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင် လူမှုရေးရာပေါင်းစည်းမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ ပိုမိုမြှင့်တင်လာစေခြင်းဖြင့် ယင်းလူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းသည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ အခြေခံကျသောအခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ရရှိစေရန် နှင့် ၎င်းတို့အား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးတို့ကို အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ “ကျွန်တော်တို့မှာ တူညီတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်” ဟု မြင့်ဆွေကပြောသည်။ ထို့အပြင်ရွာနှစ်ရွာလုံးတွင် ပညာရေးကဏ္ဍ အားနည်းလျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာရွာများတွင် ပို၍အားနည်းကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ “တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အရည်အချင်းတွေ ပိုရှိလာစေဖို့အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အသိပညာဗဟုသုတဟာ အလွန် အရေးကြီးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းဖော်ဆောင်တဲ့ အပိုင်းမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ “အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရွာနှစ်ရွာကြားက အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု နည်းခဲ့တယ်။”ဟု မောင်ကျော်မောင်က ပြောသည်။ ဆက်လက်၍ "အခုဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုခင်မင်ရင်းနှီးမှု ရှိလာပါတယ်။”
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်။
အန်နာရု (Anna Ruth)* သည်တစ်နှစ်မပြည့်မီအချိန်အတွင်းမှာပင် ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် သူ့မိသားစု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ရပြီး သူမ၏ခင်ပွန်း သေဆုံးခဲ့ရသည့်နေ့ကိုလဲ အမှတ်ရလျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အခြား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုများသူမတို့ နေထိုင်ရာ ကျေးရွာအထိ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ရွာသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်း၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် လွိုင်ကော်မြို့အနီးသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီး သူမနှင့် သူမမိသားစုဝင်များသည် အခြားသော ရွာသားများနှင့်အတူ အနီးနားရှိတောအုပ်အတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် သူမခင်ပွန်းနှင့် အချို့သောအိမ်နီးချင်းသည် အစားအစာများနှင့် အခြားမရှိမဖြစ် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ယူဆောင်ရန် နေအိမ်သို့ပြန်ချင်ခဲ့ကြသည်။ “သူ့ကိုမသွားဖို့ ကျွန်မပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့မှာအရမ်းအန္တရာယ်များတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနားမထောင်ခဲ့ဘူး။” ဟု သူမပြန်လည်ပြောပြသည်။ “ညနေကျတော့ အဖွဲ့တွေပြန်လာခဲ့ပေမယ့် သူတော့ မပါလာခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ သူ့ကိုသေနတ်မှန်ပြီး ဆုံးသွားမှန်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့ပြောင်းရွှေ့နေနေတဲ့ ယောက္ခမအိမ်မှာ ပစ္စည်းတစ်ချို့ သွားယူရင်း အပစ်ခံခဲ့ရတာ” ဟု ဆိုသည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ်မေလမှစ၍ တစ်ကျော့ပြန်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ပြင်းထန်သည့်လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်၇မြို့နယ်အနက်မှ ၆မြို့နယ်၌ လက်ရှိကာလတွင် ထိခိုက်ခံစား နေရပြီး လူပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ နေအိမ်များစွန့်ခွာ၍ ထွက်ပြေးနေကြရသည်။ အချို့မှာ ဘာသာရေး ဝတ်ပြု ကျောင်းများ၊ ရပ်ရွာလူထုစင်တာ စသော လုံခြုံသော နေရာများတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး အချို့မှာ တောအတွင်း၌ ပြောင်းရွှေ့ ပုန်းခိုနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် အခြားသော ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအကြား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး၊ ယင်းအကျိုးဆက်ကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအသစ်များ မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများနှင့် ကျေးရွာများအားမီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် လူပေါင်း ၄၄၀,၀၀၀ခန့်သည် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီး၊ ယင်းနေရပ်စွန့်ခွာနေရ သူများ၏ ထက်၀က်ကျော်ခန့်သည် မြန်မာနိုင်ငအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသရှိ ထိခိုက်နစ်နာမှုအဆိုးရွားဆုံး ခံစားခဲ့ရသည့် ကယားပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှဖြစ်ကြသည်။ ဖတ်ရှုပါ: ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု ပြင်းထန်လာမှုကြောင့် UNHCR သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ရ သူများထံ ကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ကယားပြည်နယ်ရှိ အန်နာရု နှင့် သူမမိသားစုကဲ့သို့ အခြားသူများသည်လည်း ကြိမ်ဖန်များစွာ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင် နေရသည်။ “ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက ကျွန်မတို့ပြေးလွှားနေရတာ” ဟု သူမ ရှင်းပြပြောဆိုသည်။ “ပထမတုန်းက ကျွန်မတို့ရွာ ဒီမောဆိုးမြို့နယ်ကနေ ယောက္ခမတွေနေတဲ့ လွိုင်ကော် မြို့နယ်ထဲ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်။ နောက်အဲဒီကနေ တောထဲကို ထပ်ပြောင်းပြီး လနဲ့ချီအဲ့မှာ နေထိုင်ခဲ့ရတယ်” ဟု ဆိုသည်။ သူမသည် မုဆိုးမဘဝဖြင့် ကလေးငယ်လေးဦးကျန်ရစ်ခဲ့ကာ ပြီးခဲ့သည့်လ ကယားပြည်နယ်အတွင်း လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်ခဲ့၍ လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ အခြားဘေးကင်း လုံခြုံရာကျေးရွာသို့ နောက်ဆုံးတွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာကိုကြံရာမရဖြစ်ပြီး မည်သည့်နေရာသို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ရမည် မသိတော့၍ အခြားသောနေရပ်စွန့်ခွာ မိသားစုများနှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့ပြီး အနီးဝန်းကျင်ဒေသဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ကလေးတွေကလွဲပြီး ကျန်တာအားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီ” “ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှမတွေးမိခဲ့ဘူး။ အရင်က ကျွန်မတို့မိသားစုတွေ ကိုယ့်ရွာမှာပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မကလေးတွေကလွဲပြီး အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီ” ဟု သူမက ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့သည်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယင်းကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ ဒေသခံလူထုအသိုင်းအဝန်းနှင့် ဒေသခံပရဟိတလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူတို့သည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ပြသလျက်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနေဖြင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ကိုင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော်လည်း နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဦးရေမှာ ပိုမိုရောက်ရှိလာသောကြောင့် ဒေသခံရင်းမြစ်များကို တိုးချဲ့၍ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ကယားပြည်နယ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေသော လူဦးရေ ၃ သောင်းခန့်အား ကူညီထောက်ပံ့ပေး နေရသည့် အခက်အခဲအချို့လျော့ကျစေရန် နှင့် အခြေခံလူထုများထံ အကူအညီများ ထောက်ပံ့ရန် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ UNHCR သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းကာလများမှစတင်၍ ဒေသခံမိတ်ဖက်အဖွဲ့များ နှင့် ဒေသခံလူထု အသိုင်းအဝန်း တို့နှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အနေဖြင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေရာတွင် ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အခြေခံအိမ်သုံး ပစ္စည်းများနှင့် အ၀တ်အထည်များ လုံလောက်စွာမရရှိမှုတို့ကို ဖြေရှင်းကူညီပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သော တောင်ကြီးမြို့တွင် ယာယီအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခန့်က ကယားပြည်နယ်မှ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူဦးရေ ၁ သောင်းခန့် သည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်အနှံအပြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယင်းနေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူတို့သည် စောင်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ ခြင်ထောင်များ၊ ရေသိုလှောင်ပုံးများ၊ ရေပုံးများ၊ ဖျာများ၊ တာပေါ်လင်များ နှင့် ဆောင်းရာသီသုံးပစ္စည်းများအစရှိသည့် အကူအညီများကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံ စေတနာရှင်များ မှလည်း သွားတိုက်ပွတ်တံများ၊ ဆပ်ပြာများ၊ ခေါင်းလျော်ရည်များ စသော ပစ္စည်းများကိုလည်း ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းကိုသာယူဆောင်လာနိုင့်ခဲ့သည့်အန်နာရု သည် ယင်းကဲ့သို့သော အကူအညီများ လက်ခံရရှိသောအခါ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်လျက်ရှိသည်။ “ပထမကတော့ ကျွန်မတို့က ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ဖို့ကိုက တွေဝေ ခဲ့သေးတယ်။” ဟု သူမက ရှင်းလင်း ပြောပြသည်။ “ဒါပေမယ့် ဘုန်းတော်ကြီးများက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုတယ်။ အခုဆိုရင် အခြား နေရပ် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေနဲ့ အားလုံးအတူ ညီညီညွတ်ညွတ် နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ အဝတ်အစားတချို့ပဲ ယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် စောင်တွေ၊ ရေပုံးတွေ၊ ဖျာတွေ၊ အဝတ်စားတွေ ထောက်ပံ့ပေးတာ အရမ်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေ ပါတယ်။” ဟု ဆိုသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများသည် လျော့နည်းသွားသည့် အခြေအနေ မရှိသေး၍ လာမည့်ရက်သတ္တပတ် နှင့် လများအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်သို့ နေရပ်စွန့်ခွာမှုများ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စရာနေရာတစ်ခု ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့၍စိတ်သက်သာရာရရှိခဲ့သော်လည်း အန်နာရုထ် သည် သူမရဲ့ဇာတိ ကယားပြည်နယ်သို့သာ ပြန်လည်နေထိုင် ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ “ကျွန်မကလေးတွေက ဘယ်တော့အိမ်ပြန်မလဲလို့ပဲ မေးမေးနေကြတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ မကြာခင် ပြန်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ *ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအခြေအနေကြောင့် အမည်နာမအား လွှဲပြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
အင်တာဗျူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများပါဝင်သောCOVID-19 ကော်မတီများကို ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းက ဖွဲ့စည်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေ (LIFT) က ပံ့ပိုးပြီး မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အသေးစားရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်မှတဆင့် ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုရရှိကြတဲ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄၂ဖွဲ့ထဲမှာ ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းက တစ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ LIFT ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ထားပြီး UNOPS က စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ LIFTရဲ့ Rakhine Communication Hub (RCH) က ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အမှူဆောင်ညွှန်ကြားမှူး ဦးခိုင်ကောင်းစံနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စီမံချက် လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအမြင်ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။ RCH: ဟုတ်ကဲ့ ဦးခိုင်ကောင်းစံ ခင်ဗျ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လက်ရှိ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေတစ်ဆင့် LIFT က ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဆရာတို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းပြပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့တွေဟာ LIFT ရဲ့ Small Grant Fund ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ Health is Life ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းက အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကနေ နိုဝင်ဘာလအထိ စုစုပေါင်း သုံးလ အကောင်အထည်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျေးလတ်ဒေသနေ ပြည်သူလူထုအတွက် COVID-19 ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ် ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ယခု COVID-19 တတိယလှိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လူသေဆုံးမှုနှုန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပထမလှိုင်းနဲ့ ဒုတိယလှိုင်း နှစ်ခုအတွင်း စုစုပါင်း လူသေဆုံးမှု နှုန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် COVID-19 ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် နဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို လက်လှမ်းမီနိုင်မှု နည်းပါးတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ကျေးလတ်ဒေသနေ ပြည်သူလူထုဟာ ဒီ ရောဂါရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို တုံ့ပြန်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ထိခိုက်လွယ်သော လူဦးရေတွေ အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ ကျေးလတ်ဒေသ နဲ့ IDP စခန်းတွေမှာ COVID-19 ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ဖြန်ဝေမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ Health is Life ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဝံလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက စစ်တွေ၊ ပုဏားကျွန်း နဲ့ ကျောက်တော် မြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာ ၁၅ ရွာနဲ့ IDP စခန်း နှစ်ခုမှာ COVID-19 ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ COVID-19 တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဖို့ကိုလည်း ကူညီလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရသူ အုပ်စုတွေထဲမှာဆိုရင် ရခိုင်၊ မူဆလင်၊ မြို၊ သက်၊ မရမာကြီးနဲ့ သက္ကမ တို့နေ ထိုင်တဲ့ ကျေးရွာတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအသိပညာပေးအစီအစဉ်ရဲ့ အောက်မှာဆိုရင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာမှာ အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ အယောက် ၅၀ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ စုစုပေါင်း ကျေးရွာ ၁၅ ရွာ နဲ့ IDP စခန်း နှစ်ခုမှာရှိတဲ့ လူပေါင်း ၈၅၀ က ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ RCH: ဒီစီမံကိန်းကနေ အကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့ ကျေးလတ်ဒေသနေ ပြည်သူလူထုတွေထဲမှာ ကျား၊မ ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်းက ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲခင်ဗျ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ခုနက ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့က ကျေးရွာ တစ်ရွာမှာဆိုရင် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ အယောက် ၅၀ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းက အများအားဖြင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ဒီလို သတ်မှတ်ချက်ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု မူဝါဒ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အရဆိုရင် ၁၈ နှစ်က နေ ၆၅ နှစ်အတွင်း ရှိတဲ့ ဒေသခံတွေ ဟာ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတွေထဲမှာ ပါဝင်ကြပါတယ်။ RCH: COVID-19 အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းတာတွေကို ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ဟုတ်ကဲ့၊ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရွာတစ်ရွာကို ရောက်ပြီဆိုပါစို့၊ အဲဒီမှာ အသိပညာပေးအစီအစဉ်မှာ တက်ရောက်ဖို့ လူအယောက် ၅၀ကို ကြိုတင်ဖိတ်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာကြတဲ့အတွက် ဒီလို လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောလာတဲ့ လူတွေစုံပြီဆိုလျှင် လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကို စတင်ဟောပြောပါတယ်။ သူတို့ နားလည်နိုင်လောက်သည်အထိရှင်းပြပါတယ်။ သူတို့ နားမလည်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဒါမှမဟုတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်တာတွေဆိုရင်လည်း တက်ရောက်လာသူတွေက မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းကြပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့က ချက်ခြင်း ပြန်လည် ရှင်းပြတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဒီလို အသိပညာပေးအစီအစဉ် အဆုံးသက် အပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က လူထုအခြေပြု COVID-19 တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ တစ်ခု ခင်ဗျားတို့ ကျေးရွာမှာ ဖွဲ့စည်းချင်ပါတယ်ဆိုပြီး တက်ရောက်လာသူတွေကို အသိပေးပါတယ်။ အဲဒီကော်မတီမှာ ပါဝင်လိုသူတွေက သူတို့ရဲ့ အမည်စာရင်းကို ပေးကြပါတယ်။ ဒီကော်မတီတွေက ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျေးရွာတိုင်းမှာ ဖွဲ့စည်းထားဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မတီတစ်ခုစီမှာ ခေါင်းဆောင်၊ ဒုခေါင်းဆောင် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကိုးယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ RCH: ကော်မတီဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ကို ဘယ်လို သက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ရွေးချယ်ပါသလဲ။ အဲဒီကော်မတီမှာရော ကျား၊မ ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း ကို ဘယ်လို သက်မှတ်ထားပါသလဲ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: အဓိက ကတော့ ကော်မတီဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ အခြေခံ သက်မှတ်ချက်အချိုရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကော်မတီဝင် ဖြစ်မယ့်သူဟာ အခြေခံပညာရေး တက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရမယ်။ ပြီးတော့ ရခိုင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောတက်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကော်မတီဝင်တွေဟာ ရပ်ရွာထဲမှာ COVID-19 ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီကျေးရွာကို လူကိုယ်တိုင် မသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ COVID-19 နဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုခု ကို ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် အဲဒီ ကော်မတီဝင်တွေလှမ်းပြောတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကျွန်တော်တို့ ပြောလိုက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို အဲဒီကော်မတီဝင်တွေက အပြည့်အဝနားလည်ပြီး သူတို့ရဲ့ ရပ်ရွာထဲမှာ ဒီ သတင်းစကားကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အခြေခံ သက်မှတ်ချက်တွေ ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျား၊မ အချိုးကတော့ ကော်မတီ တစ်ခုစီမှာ အမျိုးသမီး သုံးဦး၊ အမျိုးသား ခြောက်ဦး ပါဝင်ဖို့ သက်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ RCH: ဒီစီမံကိန်းကိုရော အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူတွေဘက်က ဘယ်လိုမြင်တယ်လို့ထင်ပါလဲ။ သူတို့ဘက်က အမြင်တွေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ စီမံကိန်းကို မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ အကောင်အထည်ဖော်ရတာဖြစ်တော့ သူတို့ဆီမှာ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေရှိပါသလား။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: အများစုကတော့ ဒီ စီမံကိန်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သူတို့ တိုက်ရိုက်ရရှိတယ်။ ပြီးတော့ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို သူတို့သိခွင့်ရတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ နဲ့ ရပ်ရွာအတွင်းမှာ ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက် သူတို့က ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုကြတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ အခု လူအယောက် ၅၀ ပဲ သက်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်စုတိုင်းက မိသားစုဝင်တွေအတွက် ဒီလို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ အိမ်တိုင်ရာရောက် လာလုပ်စေချင်ကြတယ်။ ဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီတတိယလှိုင်းမှာ ဒီလို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေက အဲဒီရွာတွေမှာ မရှိသလောက်ပဲ။ အရင် ဒုတိယလှိုင်းမှာတော့ အချိုရွာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့လို အဖွဲ့အချို့ လာရောက်လုပ်ကြတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါကလည်း သူတို့ပြောပြလို့ ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့။ သိကြတဲ့အတိုင်း အဖွဲ့အစည်းအများစုက လူဦးရေထူထပ်တဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာပဲ ဒီလို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ ဒီလို ထိခိုက်လွယ်သော လူတွေ နေထိုင်တဲ့ ကျေးလတ်ဒေသတွေမှာတော့ ဒီလို လုပ်ငန်းတွေက အရမ်းနည်းပါးနေပါတယ်။ စစ်တွေမှာရှိတဲ့ မူဆလင်ကျေးရွာတွေက မူဆလင်တွေဆိုရင် သူတို့ဟာ ဒီလို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လာရောက်လုပ်တာ အရင်က တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင် အရင်က ဒီလို မူဆလင်ကျေးရွာတွေမှာဆိုရင် INGO အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီလို အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတယ် လို့ အရင်က ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မြေပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန် သူတို့တွေနဲ့ စကားပြောပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်တာက INGO အဖွဲ့တွေက ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ မူဆလင်တွေထက် IDP စခန်းတွေမှာ နေထိုင်သော မူဆလင်တွေကို ပိုပြီး အထောက်အပံ့ပေးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ရေဘူယျ ပြောရမယ်ဆိုရင် မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ COVID-19 နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသိပညာ ဘယ်လောက်အမျာကြီးရှိသလဲဆိုတဲ့ ကွာခြားချက်က လူမျိုးနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ ဥပမာ မူဆလင်ရွာတွေကိုပဲကြည့်ပါ။ ရွာတစ်ရွာက COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျာကြီးသိထားသလို ဒီလို ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို လက်ခံရထားပေမယ့် အခြားသော မူဆလင်ကျေးရွာတစ်ရွာမှာ COVID-19 ရောဂါ ရှိတယ်ဆိုတာတောင် လက်မခံတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါက ရခိုင်အပါအဝင် အခြားသော အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သတင်းအချက်အလက် ရရှိမှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အချို့ ရွာတွေမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုဖို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကောင်းကောင်းမရှိသလို အချို့ အိမ်ထောင်စုတွေဆိုရင် COVID-19 ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရရှိဖို့အတွက် ရေဒီယို တစ်လုံးတောင်မရှိပါဘူး။ ဒါတွေက မြေပြင်မှာ အမှန်တကယ် ရှိနေတဲ့ အရှိတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ RCH: အခုလက်ရှိအချိန်အထိ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲခင်ဗျ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ကျွန်တော်တို့ဟာ မြေပြင်မှာ စိန်ခေါ်မှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကျောက်တော်မှာရှိတဲ့ အချို့သော မူဆလင် ကျေးရွာတွေဆိုရင် အဲဒီမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဘာသာရေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ခွင့်မပြုမှုတွေကြောင့် အိမ်ထဲကနေ အပြင်ကို သွားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် သူတို့ကို ဖိတ်ကြားဖို့အတွက် ဒါက အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အရင်ကတည်းက ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဒေသခံ မူဆလင်အမျိုသမီးအချို့ကို အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသိပညာပေးမှု ဖြစ်တာကြောင့် အပြင်ထွက်ပြီး ဒီဟောပြာမှုမှာ ခဏလောက် လာနားထောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတ့ သတင်းစကားကို အဲဒီ မူဆလင်အမျိုးသမီးတွေက တစ်ဆင့် အိမ်ထဲက အမျိုးသမီးတွေဆီရောက်အောင် ပို့ရပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို အခြေခံပြီး ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ မူဆလင်ကျေးရွာတွေကို သွားတဲ့ အခါ လမ်းမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကို မကြာခဏ ဆိုသလို ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလောက် စစ်ဆေးမှု တင်းကြပ်မှုတွေ မကြုံတွေ့ရပါဘူး။ RCH: ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ကျေးလတ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ ဘယ်လိုရှိတယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။ မတူညီတဲ့ လူမျိုးတွေကြားမှာ ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ ဗဟုသုတက သိသိသာသာ ကွာခြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူတွေရဲ့ ဗဟုသုတ ရေချိန် ကတော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့အားလုံးဟာ မတူညီသော အသိုင်းအဝိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးတော့ COVID-19 ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ရရှိတဲ့ နေရာတွေကလည်း မတူညီကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ရပ်တည်ထားပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွာတစ်ရွာကိုရောက်ပြီဆိုရင် သူတို့နဲ့ စကားပြောပါတယ်။ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် သူတို့မှာ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ ဗဟုသုတ ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ အဲဒီ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်ကနေ လက်ခံရရှိသလဲ ဆိုတာကို ပထမဆုံးလေ့လာရပါတယ်။ ဒီလို ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ- ကျွန်တော်တို့က ပထမဆုံး COVID-19 ဆိုင်ရာ အခြေခံ သိသင့်တာတွေကို သူတို့ ကိုရှင်းပြတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ကို ပြောပြတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဟာ တိုင်းပြည်တစ်ခုထဲမှာပဲ ဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့ လုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာတွေကိုရှင်းပြတယ်။ ဒီဟာတွေကို သူတို့ လက်ခံသွားပြီဆိုရင် ကျန်တာတွေကို ဆက်ပြီးရှင်းပြဖို့က မခက်ခဲတော့ပါဘူး။ အချို့ရွာတွေမှာလည်း ရခိုင်တွေဟာ ဒီရောဂါရဲ့ တည်ရှိမှုကို လက်မခံတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ရှင်းပြလို့ သူတို့ နားလည်သွားတာ၊ လက်ခံသွားတာကို မြင်ရပါတယ်။ RCH: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို လက်ခံ ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီ မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ကွားခြားမှုတွေရှိပါသလား။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ လူတိုင်းဟာ ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို မရရှိကြပါဘူး။ ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုက အရင်ကတည်းက လူတိုင်းကို မလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကုသရေးအပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြည်မလောက်မများပြားပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အခြားဒေသက လာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့ကျေးရွာတွေမှာ ကျေးလတ်ဆေးပေးခန်းတွေ ရှိပေမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေက ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေနဲ့ စျေးတွေမှာ COVID-19 အသိပညာပေးရေး အချက်အလက်တွေဖော်ပြထားတဲ့ ဗီနိုင်းတွေ ကပ်တယ်။ ပြီးတော့ COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတွေကို ပေးဝေတာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ အသိပညာပေးပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ပေးဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွှန်တော်ကတော့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ COVID-19 ဆိုင်ရာ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေလက်ခံရရှိမှုကတော့ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ သိသိသာသာ ကွာခြားချက်ကို မတွေ့ရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ RCH: မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဒီလိုအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုပါလဲ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ရခိုင်ဘာသာစကားကိုပဲ ဒီအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ ရခိုင်မှာနေတဲ့ လူအများစုဟာ ဒီဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အချို့သော မူဆလင် ကျေးရွာတွေက တက်ရောက်လာသူအချို့က ရခိုင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာမျိုး ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ဘာသာစကား အခက်အခဲကို ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ တက်ရောက်လာသူတွေထဲက ရခိုင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ မူဆလင်တစ်ယောက်ကို သူတို့အတွက် ဘာသာပြန်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ ဒါဟာ မူဆလင်ကျေးရွာတိုင်းမှာ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ဘာသာစကားကို နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ အရေအတွက်က ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တဲ့ မူဆလင်ကျေးရွာတွေထဲကမှ အချို့သော ကျေးရွာတွေမှာပဲရှိပြီး ဒါဟာလည်း အရေအတွက် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RCH: ဒီ Small Grant Fund နဲ့ပတ်သက်လို့ ပေါ့ ခြုံငုံပြီးဘာများပြောနိုင်မလဲ။ အဆိုပြုလွှာ လှျောက်ထားရတာ နဲ့ ခွင့်ပြုချက် ကျဖို့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက လွယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရမလား ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ Small Grants Fund အဆိုပြုလွှာလှျောက်ထားရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အရမ်းခက်ခဲတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်း အခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေ အလှူရှင်တွေဆီက စီမံကိန်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့မှု လှျောက်ထားခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ LIFT ရဲ့ ဒီ ထောက်ပံ့မှုဟာ လျောက်ဖို့ ခက်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အပါအဝင် အခြားသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ဒီဟာကို လျောက်ထားဖို့က အတော်လေး ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ အခြားသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအငယ်တွေလည်း ဒီ Small Grants Fund အတွက် အဆိုပြုလွှာလျောက်ထားရတာတွေကို အဆင်ပြေစွာ လုပ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ RCH: ဒီတော့ Small Grants Fund ဟာ အထူးသဖြင့် ရခိုင်မှာ ရှိတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအငယ်တွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစပျိုးမှု တစ်ခုလို့ ထင်ပါသလား။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: ဟုတ်တာပေါ့။ ဒီလို ထောက်ပံ့မှုဟာ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အရမ်း အရေးပါပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက COVID-19 ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုတွေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ဖြန့်ဝေတာမျိုးတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အရမ်းအရေးပါ ပါတယ်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း အငယ်တွေဟာ အရည်အချင်း နဲ့ စိတ်အား တက်ကြွမှုတွေ နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုအပ်နေတာက အသေးစားထောက်ပံ့မှုတွေကနေရလာမယ့် ရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပြီး ဒါတွေရှိမှပဲ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ လူအုပ်စုတွေဆီကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ LIFT ကို အကြံပြုလိုတာကတော့ COVID-19 ဆိုတာ တုံပြန်ရေး စီမံကိန်းတွေကို တင်မကပဲ အခြားသော ကဏ္ဍတွေကိုလည်း ဒီအသေးစားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုထဲမှာ တိုးချဲ့ ထည့်သွင်းစေချင်တယ်။ LIFT အနေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ၊ နည်းပညာတွေ ကိုလည်း ဒီ Small Grants Fund ကနေ တစ်ဆင့် ထောက်ပံ့ပေးစေချင်တယ်။ RCH: ဝံလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ အလှူရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများ အကြုံပြုလိုတာရှိပါသလဲ။ ဦးခိုင်ကောင်းစံ: နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေက ရခိုင်မှာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအများပြား ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သော အဖွဲ့တွေက တစ်ခုခု ထူးခြားတဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို ခဏတာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီမှာက နို်င်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ အဖွဲ့က အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်တွေကို အကြံပြုလိုတာက localization မဟာဗျူဟာကို မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနဲ့လည်း အညီဖြစ်အောင် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လည်း ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ရေးဆွဲသင့်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုတော့ အချို့သော INGO တွေဟာ အခုချန်အထိ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေဆဲဖြစ်တာကို တွေ့နေရလို့ပါ။ အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း localization နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မူဘောင်တွေ ရေးဆွဲတာ ပြင်ဆင်တာတွေအတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်မက လုပ်ဆောင်ဖို့ လုပ်အပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေသခံ လူထုဆီကို ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေပြီး ဒေသတွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေသာလျှင် တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီကိစ္စက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပါဝင်မှုက localization မှာ လိုအပ်သော်လည်းပဲ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီဟာ အလှူရှင်တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ သေချာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မူရင်းကို LIFT Fund website မှာ ပထမဆုံးဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၀၈ ရက်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် မဆွေမာက ခင်ပွန်းဖြစ်သူရယ် သားသမီးလေးယောက်ရယ်နဲ့အတူ ဇာတိရပ်ရွာ ဧရာဝတီတိုင်းကနေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို တက်လာခဲ့ချိန်မှာ စားဝတ်နေရေးကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အလုပ်ရှာမရတဲ့အတွက် အလုပ်ရှာဖို့ ဇာတိကို ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ မဆွေမာကတော့ ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရင်း ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်တစ်ခုရဲ့ မီးဖိုဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်သေးသေးလေးထဲမှာ မဆွေမာရယ် သူ့မိသားစုရယ် နေထိုင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်သာရယ်လို့လည်း မရှိကြဘဲ အနီးအနားကအိမ်မှာ နေကြတဲ့ မဆွေမာရဲ့ မိဘတွေနဲအတူ မျှသုံးကြရပါတယ်။ မဆွေမာက ရေခဲခြစ်ရောင်းပြီး အသက်မွေးပါတယ်။ ဈေးရောင်းကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာ မြန်မာငွေ ၆၀၀၀ ကျပ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာ)ဖိုးလောက်အထိ ဝင်ငွေရတတ်ပါတယ်။ ဒီငွေရယ်၊ အကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ် မောင်ချစ်နိုင်ရဲ့ အိမ်အနီးက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝင်လုပ်ရင်း ရရှိတဲ့ဝင်ငွေရယ် ပေါင်းရင်တောင်မှ မိသားစုရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေးစရိတ်ကို ကာမိရုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကောင်းဆက် ၁၂ နှစ်၊ ဇွဲထက် ၆ နှစ်နဲ့ ၁၈ လအရွယ် ကြယ်စင်ဆိုတဲ့ အငယ်လေးသုံးယောက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခကာလအတွင်းမှာ မဆွေမာ အဓိကပူပန်ရတာတစ်ခုကတော့ မိသားစုအတွက် သန့်ရှင်းတဲ့ရေရရှိဖို့ပါ။ မကြာခင်ကအထိ သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာက ရပ်ကွက်ထဲမှာ လိုက်ရောင်းတဲ့ ရေစည်လှည်းတွေဆီက ဝယ်ယူရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေဝယ်တဲ့ အခါခဲ ရေဘူးနဲ့မဟုတ်လို့ မဆွေမာက အိမ်မှာအလွယ်ရှိတဲ့ ပုံးတွေကို ပဲ ရေထည့်ဖို့အတွက်သုံးရပါတယ်။ ရေကသောက်ဖို့အတွက် တကယ်ပဲ သန့်ရှင်းရဲ့လား ဘေးကင်းရဲ့လားဆိုတာတော့ သူသေချာမသိပါဘူး။ “တစ်ခါတလေ ရေကိုမသုံးခင် ရေစစ်နဲ့စစ်ပါတယ်” လို့ သူကပြောပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ဖို့နဲ့ သောက်သုံးဖို့အတွက် ရေဖိုးက တစ်လကို ၄၀၀၀ ကျပ်နီးပါးကုန်ကျပြီး မဆွေမာတို့မိသားစုအတွက် သိသာတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ရေကို အိမ်တံခါးဝအထိ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း မဆွေမာနဲ့ သူ့မိသားစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချို့ငဲ့ဆုံးဒေသတွေမှာ နေထိုင်နေကြသူအများစုအတွက် ကြုံတွေ့နေကျ အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရိုင်တွေထဲက အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ ၁၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမှာ သောက်သုံးဖို့၊ ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွပ်ဖို့နဲ့ အိမ်သာအတွက်အသုံးပြုဖို့ ရေအလုံအလောက် မရှိကြပါဘူး။ ဒါက ကာလဝမ်းရောဂါနဲ့ အူရောင်ငန်းဖျားလို ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေအပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလိုဆိုးရွားတဲ့ အန္တရာယ်တွေကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ယူနီဆက်နဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ကလေးငယ်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်ရှိတဲ့ မိသားစုတွေကို ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လှိုင်သာယာနဲ့ အခြားဒေသတွေက အားနည်းထိခိုက်လွယ်တဲ့ မိသားစုတွေဆီ သန့်ရှင်းစိတ်ချရတဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေကို ဖြန့်ဝေပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ “လီတာ ၂၀ ဆန့် ရေသန့်ဘူးကြီး နှစ်ဘူးကို နှစ်ရက်တစ်ခါ ကျွန်မတို့အိမ်ရှေ့အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်မရေစစ်ဖို့လည်း မလိုတော့သလို ကျွန်မတို့ပုံးတွေလည်း ပေးဖို့မလိုတော့ဘူး။ ရေဘူးထဲကနေ တိုက်ရိုက်သောက်လို့ရပြီ” လို့ မဆွေမာက ပြောပါတယ်။ “ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် မိုးရေခံထားတာကြောင့် ကျွန်မက ဒီရေကို သောက်ရေသီးသန့်အတွက်ပဲ သုံးပါတယ်။ အခု ကျွန်မမှာ အပိုဝင်ငွေရှိလာပြီ။” သန့်ရှင်းတဲ့ရေက သိသာတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဖန်တီးပေးပါတယ် ရေပေးဝေရာမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေအပါအဝင် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပေမဲ့ ဒီလိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခံစားကြရပြီး ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်နေကြပါတယ်။ အခုချိန်အထိ မဆွေမာတို့လို လူပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့်ဟာ ယူနီဆက်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကတစ်ဆင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားခွင့် ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီဆက်က ရေပြတ်လပ်မှုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရပ်ရွာလူထုတွေဆီ ပိုမိုပြီး ရေပေးဝေနိုင်ဖို့၊ ရေပေးဝေရေးစနစ်တွေကို ပြန်လည်မွမ်းမံဖို့၊ ရေသန့်စင်စနစ်နဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တွေ တပ်ဆင်ဖို့အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အပြင် သန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများ ပိုမိုသိရှိလာစေဖို့ ဆက်လက် အားပေးမြှင့်တင်သွားဖို့အတွက်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။
LGBTIQ+ များအပေါ် ဆက်လက်၍ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်မှု၊ အမုန်းစကားများ၊ နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းများနှင့်၊ ၎င်းတို့အား ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အားကစားနှင့် အိမ်ရာများမှ ထပ်မံဖယ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု အသစ်များကြောင့် ကျွန်ုပ် အလွန်စိုးရိမ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများအပြားတွင် LGBTIQ+ များသည် 'ပြောင်းလဲခြင်း' ဟုခေါ်သော ကုထုံး၊ အတင်းအကြပ် ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း၊ နှိမ့်ချသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ အပါအဝင် အလွန် အန္တရာယ်ရှိသော အလေ့အထများကို ခံယူကြရသည်။ ဤအတောအတွင်း LGBTIQ+ များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆက်စပ်နေသော အကျပ်အတည်းများစွာကြောင့် အဆိုးဆုံးဒဏ်ခံရသော အပယ်ခံအုပ်စုများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမှသည် ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း၊ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ကြီးထွားလာသည့် မညီမျှမှုများအထိ ခံစားကြရပါသည်။ LGBTIQ+ များသည် အခြားသူများနှင့် တူညီသော အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ ရှိပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်များက ရှင်းလင်းပါသည်။ LGBTIQ+ များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော အလေ့အထများကို တားမြစ်ရန်၊ ကျူးလွန်ခံရသူများအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများပေးရန်နှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့ကို အဆုံးသတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ LGBTIQ+ များကို 2030 အစီအစဉ်၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ်နှင့် မည်သူမျှ နောက်ချန်မထားခဲ့ရန် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်များအဖြစ် LGBTIQ+ များကို ဘေးဖယ်ထားရခြင်း၏ အရင်းခံအကြောင်းတရားများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရပါမည်။ LGBTIQ+ များအပါအဝင် လူအားလုံး၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထောက်ခံအားပေး၍ ပံ့ပိုးကူညီမှုနိုင်မှုအတွက် ကုလသမဂ္ဂက ဂုဏ်ယူပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပါဝင်မှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိသော ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ရန် လူတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်။
WFP နှင့် UNOPS အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေတို့ လက်တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ဖြစ်ပွားနေဆဲCOVID-19 ကပ် ရောဂါဘေးဒဏ်ခံစားကြရသည့် ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသော ရပ်ရွာလူထုများအတွက် ငွေသားအထောက်အပံ့များ ပေးအပ်
ရန်ကုန်။ ။မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံဒေသများတွင် နေထိုင်နေရသည့် ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသော ရပ်ရွာလူထုများအတွက် COVID-19ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကို ဆက်လက်တုံ့ပြန် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ငွေသားအထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို UNOPS မှ စီမံခန့်ခွဲသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဥ် (WFP) တို့မှ စတင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့ရှိ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားနေရသော ဒေသများမှ နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်နေရသူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်မိသားစုများ အပါအဝင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၆,၀၀၀ ကျော်ကို WFP ၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် LIFT မှ တစ်ကြိမ်တည်း ငွေသားပံ့ပိုးမှု ၆၅,၀၀၀ ကျပ် (၃၆ ဒေါ်လာခန့်) ကို မကြာသေးမီက ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါငွေသားပံ့ပိုးမှုသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ဘဝရပ်တည်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ခဲ့ကြရသည့် မိသားစုများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်၍ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အပါအဝင် အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို လက်လှမ်းမီစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ “ငွေသားအထောက်အပံ့တွေက မိသားစုတွေကို အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်နေရတာမျိုးတွေ ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အကူအညီ ဖြစ်စေမှာပါ။ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ မိသားစုတွေအနေနဲ့ ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးပြီး လူမှုရေး၊စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေ အများကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ဖို့လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု LIFT ရန်ပုံငွေ ညွှန်ကြားရေးမှုး Sara Netzer မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါငွေသားထောက်ပံ့မှုအကူအညီကို WFP ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်သည့် ငွေသားပေးအပ်မှုအစီအစဥ်မှတစ်ဆင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “COVID-19 ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်နယ်လေးခုက ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေအတွက် LIFT ရဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်မှာ WFP အနေနဲ့ တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။” ဟု WFP ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် နှင့် ဒါရိုက်တာ Stephen Anderson မှမှတ်ချက်ပြုပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းက စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ ရပ်ရွာလူထုတွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ နဲ့ အာဟာရ ပံ့ပိုးမှုတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ WFP ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ LIFTက ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေကြောင့် ပိုမိုအထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ LIFT မှ ယခင်ကပေးအပ်ခဲ့သည့် ထပ်ဆောင်းငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများသည် မိခင်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ၎င်းတို့၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် ခွင့်ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကြောင့် ပြည်သူများ၏ ဝယ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ LIFT ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးကြသော ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဥရောပ သမဂ္ဂ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဩစတြေးလျ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ အိုင်ယာလန်နှင့် နော်ဝေး နိုင်ငံများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ LIFT သည် အဆိုပါ အလှူရှင်အဖွဲ့များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ပြည်သူပေါင်း ၂.၉သန်းကျော်အတွက် အထောက်အပံ့အကူအညီများကို COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်မှစ၍ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ *** အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေ (LIFT) သည် ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အလှူရှင်များ စုပေါင်းထည့်ဝင်ထားသည့် ရန်ပုံငွေဖြစ်ပြီး UNOPS မှ စီမံခန့်ခွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေသော လူဦးရေကို ထက်ဝက်လျှော့ချရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေသော အိမ်ထောင်စုများ၏ အသက်မွေးမှုများ ရေရည်တည်တံ့ရန် နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုအားကောင်းစေရန်အတွက် LIFT က ရည်ရွယ်ပြီး ၎င်းပြည်သူများ၏ စီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်စွမ်းများ အပြည့်အဝရောက်ရှိစေရန် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိရာ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများ၏ အာဟာရ အဆင့်အတန်းများ တိုးတက်လာခြင်း နှင့် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းနှင့် ဖိစီးမှုဒဏ်များကြောင့် ထိခိုက်လွယ်မှုကို လျော့ကျစေခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်စုစုပေါင်း၏ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းသော ဒေသများရှိ ပြည်သူပေါင်း ၁၂.၈သန်းကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်အကြောင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ပဋိပက္ခနှင့် သဘာဝဘေးဒဏ် ထိခိုက်ခံရသူများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့မှတစ်ဆင့် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သာယာဝပြောမှုတို့ကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ WFP ကို တွစ်တာတွင် @WFP_Media နှင့် @WFPAsiaPacific တို့မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၀၈ ရက်။
၂၀၂၂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ - United Nations Myanmar ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ရန်ကုန်။ ။ United Nations Myanmar သည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ ၏ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန်၊ ၄င်းတို့နိုင်ငံ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို ပုံ‌ဖော်ရာတွင် ၄င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် နိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ အကြပ်အတည်းများကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့် လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများကို အဓိကထားပါမည်ဟူသော ကတိက၀တ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ထပ်လောင်း အတည်ပြုပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဆောင်ပုဒ်မှာ “ယနေ့ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုသည် ရေရှည်တည်တံ့သော မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံ၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က နိုင်ငံတွင်း အကြပ်အတည်း ပေါင်းစုံကို အချိုးအစားမညီမျှစွာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားနေစဥ် COVID 19 ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် အခြေခံကျသော လူ့အခွင့်အရေးများပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ရှေ့တန်းမှတောင်းဆိုခြင်းတို့တွင်လည်း ဦးဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ United Nations Myanmar မှ ထုတ်ပြန်ထားသော နောက်ဆုံးသတင်းအရ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီ ၂၈ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေ့ပြောင်းလူဦးရေ ၈၇၃,၀၀၀ ရှိလာပြီး အဆိုပါစာရင်းတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီ ၁ရက်နေ့ကတည်းက အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းလူဦးရေ ၅၀၂,၆၀၀ နှင့် ပြီးခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်မှုများမှ ရွှေ့ပြောင်းလူဦးရေ ၃၇၀,၄၀၀ တို့ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်။ World Bank နှင့် ILO တို့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင် အကြပ်အတည်းများ၏ လူမှုစီးပွားရေး သက်ရောက်မှုကို အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများက အဆမတန် ထိခိုက်ခံစားကြရသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ILO ၏ စာရင်းအရ ၂၀၂၁ခုနှစ်၏ ပထမ ခြောက်လတွင် အမျိုးသမီး ၅၈၀,၀၀၀ ခန့် အလုပ်အကိုင်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ UNDP နှင့် UNWomen တို့၏ မကြာသေးခင်က လေ့လာချက်တွင် အမျိုးသမီးများသည် COVID 19 ကပ်ရောဂါ၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ စီးပွားရေးတို့တွင် မကြုံစဖူး သက်ရောက်မှုတို့၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေကြရကြောင်း၊ ၀င်ငွေရသည့် အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းများ လျော့နည်းလာကြောင်း၊ အိမ်တွင်းအလုပ်နှင့် အခကြေးငွေမရသည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်တာ၀န် များပြားလာနေကြောင်းကို အမျိုးသမီး ထက်၀က်ခန့်က သတင်းပို့ခဲ့ပြီး ၀င်ငွေကျဆင်းခြင်းတို့ကို ဖြေရှင်းရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အခက်အခဲအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာကြကြောင်း၊ ကိုယ်၀န်ဆောင် ကျန်းမာ‌ရေး စောင့်ရှောက်မှုများအပါအ၀င် ၀န်ဆောင်မှုများရရှိရန် အခက်အခဲများပြားလာကြောင်းလည်း အမျိုးသမီးများက သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေမှုများကို ဖြေရှင်းရန် UN Country Team အဖွဲ့၀င်များသည် ၄င်းတို့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံအမျိုးသမီး အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးပြီး အကြပ်အတည်းများကို တုံ့ပြန်‌ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အမျိုးသမီးပေါင်း ၂၈,၆၁၁ ဦးအတွက် ကျား-မအခြေပြု အကြမ်းဖက်ခံရမှုအပေါ် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး ၄၆,၁၅၈ ဦးအတွက် လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အရေးပါသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန် ဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ‌ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများကို ကူညီခြင်းအနေဖြင့် အမျိုးသမီး ၆,၅၀၂ ဦးကို သားဖွားမိခင် အရေးပေါ် လွှဲပြောင်းပေးမှုများတွင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေး ၁.၅ သန်းခန့်အတွက် ခံနိုင်စွမ်းရည် တည်ဆောက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းအတွင်းနေ့လည်စာကျွေးခြင်းအပါအ၀င် အစားအစာနှင့် အာဟာရ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေး တစ်သန်း၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ပံ့ပိုးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေး ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်ကို ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ရပ်ရွာအတွင်း ကလေးပျော်နေရာများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အမျိုးသမီး ၃,၅၀၀ နှင့် မိန်းကလေး ၁၄,၀၀၀ ကျော်တို့ကိုလည်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများ ကူညီခဲ့သည်။ အလှူရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းသည် အမျိုးသမီးအများစုပါသည့် ထိခိုက်လွယ်သော အထည်ချုပ် အလုပ်သမား ၃၉,၀၄၂ဦးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇သန်းနှင့်ညီမျှသော ငွေသားလွှဲပြောင်းပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ် ပထမ နှစ်၀က်အတွင်း ‌ငွေကြေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း အမျိုးသမီး ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါ၀င်သည့် ၂.၄သန်း လူဦးရေကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၉၈ သန်းကျော် ချေးငွေများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသောဒေသများတွင် အမျိုးသမီး ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းပါ၀င်သည့် လူဦးရေ ၂၅၇,၀၀၀ ကျော်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၂ သန်း ချေးငွေ ထုတ်ချေးခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်အတူ တစ်သားတည်း ရှိပါကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ရာတွင် ၄င်းတို့ဘက်မှ ရပ်တည်သည့် ကတိက၀တ်များကို ထပ်မံအတည်ပြုဖော်ပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ပြောင်းလဲပေးနေသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်မှု၊ ၄င်းတို့၏ အတွေးအခေါ်၊ တီထွင် ဆန်းသစ်မှုများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၄င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောကြားချက်ကို ထပ်လောင်းပြီး ဖော်ပြပါသည်။ ယနေ့ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု မရှိပါက ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်၊ တန်းတူညီမျှသော အနာဂတ်ကို ရောက်ရှိရန် အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်နေပါမည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု ပြင်းထန်လာမှုကြောင့် UNHCR သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူများထံ ကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ လူဦးရေနှစ်ဆ မြင့်တက်လာခဲ့သော ပြည်တွင်း၌နေရပ်စွန့်ခွာသူများသည် အရေအတွက်အားဖြင့် ၈၀၀,၀၀၀ကျော်လွန်လာပြီဖြစ်၍ သိန်းနှင့်ချီသော ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများကို ကူညီရန် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ(UNHCR) သည် ၎င်း၏အရေးပေါ် ကူညီတုံ့ပြန်မှု လုပ်ငန်းများအား တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တိုက်ပွဲများနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများသည် လျော့နည်းသွားမည့် အခြေအနေမရှိဘဲ ဆက်လက် ပြင်းထန်လျက်ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လုံခြုံရေးသည် မြန်ဆန်စွာ ယိုယွင်းလာသည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့် လများတွင် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းများ မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု UNHCR မှ ခန့်မှန်းထားသည်။ UNHCR ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ နေရပ်စွန့်ခွာ နေထိုင်သူ ဦးရေ အသစ် ၄၄၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး၊ ယခင်က အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြသူ ဉီးရေ ၃၇၀,၀၀၀ ရှိကြောင်း သိရသည်။။ UNHCR နှင့် မိတ်ဖက်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများအား မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ထပ်ဆောင်း ရင်းမြစ်များ အသုံးပြုကာ များစွာသော နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား တတ်နိုင်စွမ်းရှိသမျှ ကျယ်ပြန့်စွာပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် ဒေသခံ ရပ်ရွာလူထု၏ တုံ့ပြန်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ တောင်ပိုင်းရှိ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) အပါအဝင် ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့)နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူ (အသစ်) ဉီးရေ ၄၄၀,၀၀၀ ၏ ထက်ဝက်‌ကျော်ရှိသည်။ ကရင်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအကြား စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းမှုများ ကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်မှုအများဆုံး ပြည်နယ်များ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှု လိုအပ်နေသည့် အခြားပဋိပက္ခဒဏ်ခံရသော ဒေသသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ဒေသဖြစ်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် လူဉီးရေ ၁၉၀,၀၀၀ ခန့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရဆဲဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာဒေသအများအပြားတွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေ၊ လမ်းပိတ်ဆို့ထားမှုနှင့် ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော စိန်ခေါ်မှုများကြောင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် နယ်ခံရပ်ရွာလူထု နှင့် ရပ်ရွာအတွင်းအရေးပေါ် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ပေးသူများသည် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေသူများအား ကူညီရာတွင် ဉီးဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်လျက်ရှိပြီး၊ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင် လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းကို ပြသလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါနေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူများ၊ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူများနှင့် နယ်ခံရပ်ရွာလူထုများ စသော ထိခိုက်ခံစားရ သူများအား ကူညီရန် UNHCR သည် UN အေဂျင်စီများ၊ ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ရပ်ရွာ လူထုအသိုင်းအဝန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် UNHCR ၏ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီသည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ကိုးခုရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသူ ၁၇၀,၀၀၀ ထံ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေသများတွင် UNHCR နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများဖြစ်သော တာပေါ်လင်များ၊ ကြိုးများ၊ စောင်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ခြင်ထောင်များ၊ ရေပုံးများ၊ ဖျာများ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် တကိုယ်ရေသုံး အကာအကွယ် ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဆိုလာမီးအိမ်များနှင့် လူကြီး၊ကလေးငယ်များအတွက် ဆောင်းရာသီ သုံးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုထိခိုက်ခံစားခံခဲ့ရသော ကယားပြည်နယ်ဘက်မှ ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများသည် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများရှိလာခဲ့၍ မကြာသေးမီက UNHCR နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းကာ တောင်ကြီးမြို့တွင် ယာယီအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ်အကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေရသူများနှင့် တောင်ကြီးမြို့အနီးရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများ အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးမှုအား ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး၊ နီးစပ်ရာမြို့နယ်များသို့လည်း လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ UNHCR နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်လအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ပြောင်းရွှေ့နေရသူပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ခန့်နှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ လူပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့်ကိုလည်း အကူအညီအထောက်အပံ့များ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ ကုန်စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ဝင်ငွေကျဆင်းခြင်း၊ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကာလရှည်ကြာ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ကူညီစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သော လူဉီးရေ မြင့်တက်လာပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေသည် ရေရာမှုမရှိပဲ ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်။ ယင်းအကျိုးဆက်ကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူအများစုသည် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုအပေါ် မှီခိုအားပြုလျက်ရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူ ရိုဟင်ဂျာ ၆ သိန်းခန့် အပါအဝင် ကျေးရွာများနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာ စခန်းများရှိ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေရသူ ၁၄၈,၀၀၀ ခန့်တို့သည် ထိခိုက်လွယ်ပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများအဖြစ် ကျန်ရှိနေသေးသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကြုံတွေ့နေရသော်ငြားလည်း UNHCR သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဆက်လက် တည်ရှိပြီး၊ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း အဓိကကျသော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ် နေသူများထံ အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရန် ကတိပြုထားပြီး၊ အကူအညီ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာတွင် လုံခြုံ၍ အဟန့်အထားမရှိ ပြည့်ဝစွာ ပေးအပ်နိုင်ရေး တိုက်တွန်း တောင်းဆိုပါသည်။ သို့မှသာ ဒေသတွင်းနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် UNHCR သည် ၎င်း၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအသစ် ဖြစ်ပေါ်နေသောနေရာများတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ဆက်လက်တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသော အကျပ်အတည်းများကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံလောက်သော လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီပေးနိုင်ရန်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော လူထု အသိုက်အဝန်းများကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆.၇ သန်း လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တိုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်သူများ နှင့် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူ လူပေါင်း ၁.၂ သန်းကျော်တို့အတွက် အခြေခံအကာအကွယ်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အခြေခံအခွင့်အရေးများ ပိုမိုလက်လှမ်းမီ စေရန် စည်းရုံးညှိနှိုင်းခြင်း၊ မလိုလားအပ်သည့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများလျော့ပါးလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အတင်းအကြပ်နေရပ်ပြန်စေခြင်းအားကာကွယ်တားဆီးခြင်း နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ကို ဉီးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်။
အိုင်အယ်လ်အို၏ ခန့်မှန်းချက်က ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးမှု ၁.၆သန်း ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်
ရန်ကုန် (ILO သတင်း) - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာရုံး (ILO)က ထုတ်ပြန်သည့်ခန့်မှန်းချက် အသစ်အရ စစ်တပ်၏အာဏာာလွှဲပြောင်းရယူခြင်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုး၏ သက်ရောက်မှုကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီး၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်အကိုင် ၁.၆သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် စစ်တပ်က အာဏာလွှဲပြောင်းယူအပြီး ၁နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း၊ လုပ်သား စျေးကွက်သည် ဆက်လက်၍ မခိုင်မခံ့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသော်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၌ အလုပ်လုပ်သည့် အချိန်နာရီသည် ၁၈ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။ ယင်းသည် အချိန်ပြည့်အလုပ်သမားပေါင်း အနည်းဆုံး ၃.၁သန်း ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့်ညီမျှသည်။ ဤအလုပ်လုပ်ချိန်နာရီဆုံးရှုံးမှုသည် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုအပြင် မိမိအရည်အချင်းအောက် နိမ့်သည့်အလုပ်၌ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည်။ အဓိကကျသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများသည် အတန်ကြီးမားသည့် ရိုက်ခတ်မှုကိုခံစားကြရသည်။ ကျေးလက်ဒေသ များမှလယ်သမားများသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း၏ ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုကိုခံရသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အထည်ချုပ်၊ ခရီးသွားနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အပြင်းထန်ဆုံးရိုက်ခတ်ခံရသည့် လုပ်ငန်းများထဲပါရှိခဲ့သည်။ နှစ်အလိုက် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများသည် ခန့်မှန်းခြေအရ ၃၁ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၇ရာခိုင်နှုန်း၊ နှင့် ၃၀ရာခိုင်နှုန်းသို့ အသီးသီးရောက် ရှိ လာခဲ့သည်။ ခြုံငုံ၍ဆိုရသော် အလုပ်လုပ်ချိန် နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ရပ်စလုံးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးရှုံးမှုသည် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးရှုံးမှုထက်ပို၍ အချိုးအစားမညီမျှစွာရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားနှင့်ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှု အလွန့်အ လွန်များခြင်း၊ နှင့် အများဆုံးဖြစ်စေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ “စစ်တပ်၏အာဏာလွှဲပြောင်းရယူမှုနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါသည် မြန်မာပြည်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားများကို စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ အခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေခဲ့ဖြစ်သည်။ လုပ်သားစျေးကွက်အတွင်း တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည့်နှစ်များက နောက်ပြန်ဆွဲလျက်နေသည်ကို မြင်နေရလျက်ရှိသည်။ ဤသို့ဆက်၍ ဖြစ်နေပါမူ၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ မရေရာမသေချာမှုများ တိုး၍ဖြစ်လာမည့်ဘက်သို့ ဦးတည်သွား နိုင်ပါသည်” ဟု ILO (မြန်မာ)၏ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ/ကိုယ်စားလှယ် Mr. Donglin Li ကပြောကြား သည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Employment in Myanmar in 2021: A rapid assessment (January 2022) တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ILO www.ilo.org သည်ကုလသမဂ္ဂ၏အထူးအေဂျင်စီဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၇နိုင်ငံမှ အစိုးရ၊အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကို အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံနှုန်းများကိုချမှတ်ရန်လည်းကောင်း၊ မူဝါဒများကိုဖော်ထုတ်ရေးဆွဲရန် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး အမျိုးသားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့်အလုပ်အကိုင်ဖြစ်စေရန်မြှင့်တင် ခြင်းအတွက်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်လည်းကောင်း အတူစုစည်းပေးသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်။
ပြဒါးဆိုင်ရာ မီနာမာတာကွန်ဗင်းရှင်း (ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲများ)
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၉ ရက်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ ဥပဒေ
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်။